Kitra – «Poule des As» : mbola resin’ny Cnaps ny Som-Fosa Juniors | NewsMada
Kitra – «Poule des As» : mbola resin’ny Cnaps ny Som-Fosa Juniors
Tsara fanombohana ny Cnaps Sport, teo amin’ny lalao miverina amin’ny “Poule des As”, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2016, taranja baolina kitra. Fihaonana, nanomboka omaly alahady ary tanterahina any amin’ny kianja Ampasambazaha Fianarantsoa.
Resin’ny Cnaps Sport, tamin’ny isa 2 noho 1, ny Som-Fosa Juniors. Niady ny fihaonana ary somary henjankenjana ny fifandonana teo amin’ny roa tonta. Nanokatra ny isa ny Som-Fosa Juniors, teo amin’ny minitra fahenina. Baolina tafiditr’i Dax tamin’ny alalan’ny daka teo amin’ny faritry ny 16 m. Saika nahasahala ny isa ny Cnaps Sport teo amin’ny minitra faha-45 saingy tratry ny “position de hors jeu” i Niasex. Io isa 1 noho 0 io no nentin’ny roa tonta niala sasatra.
Nahafaty baolina indray i Jean-Yves, ho an’ny Som-Fosa Juniors, teo amin’ny minitra faha-50 amin’ny fidirana faharoa saingy lasa aloha kely izy, ka “hors jeu”. Efa tany amin’ny minitra faha-87 vao nahasahala ny isa ho 1 sy 1 ny Cnaps, tamin’ny alalan’i Ando, kapiteny rehefa nahazo tolotra avy amin’i Toby. Tsy nijanona teo fa mbola nampian’i Niasex izany tany amin’ny fiafaran’ny fotoana. Tsy mbola afa-bela amin’ny Cnaps indray izany ny Som-Fosa Juniors.
Teo amin’ny lalao ilany, niondrika teo anatrehan’ny Elgeco Plus, tamin’ny isa 2 noho 0 ny FC Zanak’Ala. Hitohy rahampitso talata ny andro faharoa ka ny Som-Fosa Juniors, hifandona amin’ny Elgeco Plus ary ny Cnaps Sport hifampitana amin’ny FC Zanak’Ala.